Usoro oru ngo na ntanetị abanyela n'ime nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-etinye iyi ọrụ, ọrụ, ịhazi usoro, njikwa akwụkwọ yana njikọta na sistemụ ndị ọzọ. Nke a bụ ụlọ ọrụ na-aga n’ihu n’ihu ma enwere ọtụtụ ndị egwuregwu n’ụlọ ọrụ ahụ. Anyị nwara ịchọpụta ndị egwuregwu kachasị n'ime ụlọ ọrụ nkwukọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya ahịa ebe a!
Ọkụ ọkụ - Bloomfire ihe ọmụma itinye aka na ikpo okwu na-enye ndị otu egwuregwu ike ịbanye na ma nye aka na ọgụgụ isi nke nzukọ gị.
Ngwa MangoApps onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nkwukọrịta & ikpo okwu.
Monday.com - ngwa oru mmekorita nke n’enye gi aka ileputa oganihu ndi otu gi ka i wee mara ebe ihe no.
Tags: azendoobizzmineọkụ ọkụnkatajikọtaramkpokọtaogwe osisi collabspotdiscuzzgrafffectụlọ nzukọjiveJikọọmangoappsmindjet jikọọoogwavePodioprotonetnchịkọtaihe ederedetụọ yandị ahịaire ere ahịasapsap ihe ịga nke ọmamkpesammadụihe ịga nke ọmaswabrarụ ọrụjikwaa
Marc Wright kwuru